Tag: employment hierarchy | Martech Zone
Tag: ọrụ hierarchy
Tọzdee, Septemba 6, 2007 Monday, March 18, 2013 Douglas Karr
Ọnwa ole na ole gara aga, ị gaghị ejide m na tebụl m ruo elekere 9AM ma ọ bụ karịa. Ọ bụghị na m na-arụ ọrụ mbubreyo… ọ bụ naanị na ọrụ m na-arụ ọrụ m karịa m na-arụ ọrụ ya. Ikekwe, ọ bụ ọrụ kachasị mma mmadụ nwere ike ịchọta ebe a n'etiti etiti ọdịda anyanwụ. Na ụlọ ọrụ ngwanrọ, m ga-agbagha ndị na-achọ ọrụ ka mma. Abụ m onye njikwa ngwaahịa na otu ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa -